CSKA မော်စကိုအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်
မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၂) အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ်များ
3 Oct 2018 . 6:33 AM
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၂) အင်္ဂါနေ့ပွဲတွေမှာတော့ မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ရယူခဲ့တဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ CSKA မော်စကိုအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဘိုင်ယန်၊ မန်ယူအသင်းတွေလည်း အိမ်ကွင်းမှာ နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တယ်။ တခြားထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ မန်စီးတီး၊ ရိုးမားအသင်းတွေကတော့ နိုင်ပွဲကိုယ်စီ ရယူခဲ့ကြပါတယ်။
CSKA မော်စကိုနဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းတို့ပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ပွဲစပြီး မိနစ်ပိုင်းမှာ ပေးခဲ့ရတဲ့ ဂိုးကို ပြန် ချေပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အိမ်ရှင်အသင်းကို ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာ၊ ဂိုးကန်သွင်းမှုအသာနဲ့ ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲအစ(၂)မိနစ်မှာ CSKA မော်စကို ကစားသမား ဗလာဆစ် Vlašić ရဲ့ ဂိုးကြောင့် မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ ဒီပွဲမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၂၀၀၆-၀၇ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် ရီးယဲလ်တို့ (၃)ပွဲဆက် ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကို ပြန်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ အေဂျက်စ်အသင်းကို အနိုင်မကစားနိုင်ခဲ့ဘဲ ပွဲအစ(၄)မိနစ်မှာ ဟမ်းမဲလ် Hummels ရဲ့ ဂိုးနဲ ဦးဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အေဂျက်စ်အသင်းက Mazraoui က ချေပဂိုးပြန်သွင်းခဲ့လို့ (၁)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တယ်။ ရလဒ်တွေဆိုးရွားနေတဲ့ မန်ယူအသင်းကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ ဗလင်စီယာ အသာမရခဲ့ဘဲ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပါတယ။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ကစားပုံက အမှားများနေဆဲဖြစ်ပြီး ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုလည်း အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၂) အင်္ဂါနေ့ ရလဒ်များ
AEK Athens2–3Benfica
Bayern Munich 1 – 1 Ajax
Lyon2–2Shakhtar Donetsk
Roma5–0Viktoria Plzen
Photo:Manchester United Twitter,Real Madrid Twitter
မထငျမှတျတဲ့ ရလဒျတှေ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၂) အင်ျဂါနပှေဲ့စဉျမြား
ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၂) အင်ျဂါနပှေဲ့တှမှောတော့ မထငျမှတျတဲ့ ရလဒျတှေ ထှကျပျေါခဲ့တယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)နှဈဆကျတိုကျ ရယူခဲ့တဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ ရီးယဲလျအသငျးဟာ CSKA မျောစကိုအသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ဘိုငျယနျ၊ မနျယူအသငျးတှလေညျး အိမျကှငျးမှာ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့တယျ။ တခွားထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ဂြူဗငျတပျဈ၊ မနျစီးတီး၊ ရိုးမားအသငျးတှကေတော့ နိုငျပှဲကိုယျစီ ရယူခဲ့ကွပါတယျ။
CSKA မျောစကိုနဲ့ ရီးယဲလျအသငျးတို့ပှဲမှာ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ပှဲစပွီး မိနဈပိုငျးမှာ ပေးခဲ့ရတဲ့ ဂိုးကို ပွနျ ခပြေနိုငျခွငျးမရှိဘဲ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ရတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ အိမျရှငျအသငျးကို ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာ၊ ဂိုးကနျသှငျးမှုအသာနဲ့ ကစားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပှဲအစ(၂)မိနဈမှာ CSKA မျောစကို ကစားသမား ဗလာဆဈ Vlašić ရဲ့ ဂိုးကွောငျ့ မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။ ဒီပှဲမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ၂၀၀၆-၀၇ နောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈ ရီးယဲလျတို့ (၃)ပှဲဆကျ ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကို ပွနျပိုငျဆိုငျခဲ့ရတယျ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးကလညျး အိမျကှငျးမှာ အဂေကျြဈအသငျးကို အနိုငျမကစားနိုငျခဲ့ဘဲ ပှဲအစ(၄)မိနဈမှာ ဟမျးမဲလျ Hummels ရဲ့ ဂိုးနဲ ဦးဆောငျခဲ့ပမေယျ့ အဂေကျြဈအသငျးက Mazraoui က ခပြေဂိုးပွနျသှငျးခဲ့လို့ (၁)ဂိုးစီသရကေခြဲ့တယျ။ ရလဒျတှဆေိုးရှားနတေဲ့ မနျယူအသငျးကလညျး အိမျကှငျးမှာ ဗလငျစီယာ အသာမရခဲ့ဘဲ ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့ပါတယ။ မနျယူအသငျးရဲ့ ကစားပုံက အမှားမြားနဆေဲဖွဈပွီး ဂိုးသှငျးခှငျ့တှကေိုလညျး အသုံးမခနြိုငျခဲ့ပါဘူး။
ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ(၂) အင်ျဂါနေ့ ရလဒျမြား
by Naing Linn . 18 mins ago